Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Bakool iyo Wararkii ugu dambeeyey - Awdinle Online
Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Bakool iyo Wararkii ugu dambeeyey
Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in goor dhow dagaal u dhexeeyey ciidamada Xoogga dalka , gaar ahaan guutada 9-aad iyo dagaaylayahanada Al-Shabaab uu ka dhacay qeybo ka mid ah gobolkaasi.
Dagaalka oo ahaa mid culus ayaa yimid, kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Abal oo 20 kiiilo mitir dhinaca bari kaga beegan degmada Xudur ee gobolka Bakool.
Sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in dagaalka ay qeyb ka ahaayeen ciidamo taabacsan wadaadka Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), kuwaas oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku sugnaa halkaasi
Ilo deegaanka ah ayaa innoo sheegay in dagaalka la’isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, islamarkaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, mana jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi.
Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobollada Baay iyo Bakool ayaa had iyo jeer weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku waaday saldhigyada ciidamada dowladda ee gobolladaasi.
Previous articleColdoon oo xabsiga laga siidaayay
Next articleBanaan bax lagu taageerayo hadalkii Madaxweyne Farmaajo oo ka socda Muqdisho